UPDATE: Faah-faahin cusub oo ku saabsan qaraxii caawa ee Gaalkacyo & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Faah-faahin cusub oo ku saabsan qaraxii caawa ee Gaalkacyo & Wararkii...
UPDATE: Faah-faahin cusub oo ku saabsan qaraxii caawa ee Gaalkacyo & Wararkii ugu dambeeyay
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahino cusub oo dheeraad ah ka kasoo baxaysa Qarax caawa ka dhacay Koonfurta magaalada Gaalkacyo gaar ahaan qeybta Galmudug.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay Waxyaabaha Qarxa ayaa lagu weeraray Hoteel uu daganaa Taliyaha Ciidanka dhulka Sareeyo Guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir iyo Taliyaha ciidanka qeybta 21 aad Cabdicasiis Qooje.
Labada taliye ayaa ka badbaaday weerarka waxaana waxyeelo ay soo gaartay Askar iyo dad Shacab ah oo ku sugnaa goobta uu Qaraxu ka dhacay.
Goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa la sheegayay in ay ka ag dhawaayeen Haween qaad iibiya, lama oga illaa iyo hadda waxyeelada gaartay inta ay la egtahay.
Dhaawacyo kala duwan ayaa la geeyay Isbitaalada Gaalkacyo, walow la soo sheegay inay ku dhinteen tiro dad ah oo isugu jira askar iyo shacab.
Faahfaahin ku saabsan qaraxii caawa ee Gaalkacyo
isku day dil ka badbaaday